24 Septambra 2020 - FJKM Québec - Canada
Ireo toetra takiana amin’ny mpiandraikitra tsirairay avy eo anivon’ny Fiangonana
MALAKIA 2 : 1-9
2:1 Ary ankehitriny, ry mpisorona, dia ho aminareo izao didy izao:
2:2 Raha tsy hihaino na handatsaka am-po ka hanome voninahitra ny anarako ianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia halefako hamely anareo ny ozona, ka hozoniko ny tso-drano ataonareo; eny, efa voaozoko sahady izany, satria tsy nandatsaka am-po ianareo.
2:3 Indro, hasiako teny mafy ny voa afafinareo, ary hofafazako tain-droroha ny tavanareo, dia ny tain-droroha avy amin’ny andro firavoravoanareo; ary hailika miaraka aminy ianareo.
2:4 Dia ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo Aho, mba haharetan’ny fanekeko amin’i Levy, hoy Jehovah, Tompon’ny maro.
2:5 Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana; ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka dia natahotra Ahy sy nangovitra teo anatrehan’ny anarako izy.
2:6 Ny lalan’ny fahamarinana no teo am-bavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin’ny molony; tamin’ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahany nandeha tamiko, ary maro no nampialainy tamin’ny heloka.
2:7 Fa ny molotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalana, ary ny lalana hotadiavina eo am-bavany, satria irak’i Jehovah, Tompon’ny maro, izy.
2:8 Fa ianareo kosa dia efa nivily lalana sady nampahatafintohina olona maro ny amin’ny lalana ary namadika ny fanekena amin’i Levy, hoy Jehovah; Tompon’ny maro.
2:9 Ary Izaho kosa dia efa nanolotra anareo ho fanazimbazimba sy ho fanao tsinontsinona eo anatrehan’ny vahoaka rehetra, noho ny tsy nitandremanareo ny lalako sy ny nizahanareo tavan’olona ny amin’ny lalana.
1-Mihaino, mandatsaka ao am-po , manome voninahitra ny Anaran ‘Andriamanitra
Ny Mpisorona dia ireo nomena andraikitra manokana hisahana ny fisoronanana. Izy ireo no nisolo tena ny olona hampita ireo fanatitra sy ny fifonana amin’ny Tompo . Izy ireo koa no omen’ny Tompo fahefana manokana hanolotra tsodrano. Izany dia fanompoana masina izay mitaky fahamasinana, fahadiovam-po ary fitondrantena mendrika.Tsy natao hanararaotana fahefana na atao am-pahazarana fotsiny fa adidy miavaka. Ny Tompo mihitsy no nametraka fepetra eto amin’izay misahana andraikitra manokana eny amin’ny alitara mba hihaino , handatsaka am-po ary hanome voninahitra ny Anaran’ny Tompo .
2-Mamantatra ny valin’asa avy amin’Andriamanitra
Mizara roa miavaka tsara ny valin’asa avy amin’ny Tompo . Fiainana, fiadanana (and5) ho an’izay mandeha amin’ny làlan’ny fahamarinana . Ozona sy fahatezerana kosa no miandry ireo mpivily làlana (and2-3). Ho an’ny Mpisorona sasany izay tsy miorina tsara dia tsy izy irery no voa fa ny tsodranony koa dia tonga zava-poana (and2) , hany ka misy fiantraikany amin’ny vokatra any an-tsaha izany , manakana ireo fitahiana efa sitraky ny Tompo ho an’ny vahoakany . Soa ihany fa teo i Jesoa , Ilay Mpisorona tsy manan-tsiny sady fanantenana ho antsika .
Tanisao ireo andraikitra mitaky fahamatorana sy fahamasinana manokana eo amin’ny Fiangonana .